Izitimela zaseSwitzerland zibalwa Okuhamba phambili EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izitimela zaseSwitzerland zibalwa Okuhamba phambili EYurophu
izitimela Swiss kukhona esingcono kakhulu eYurophu ngokuvumelana Boston Consulting Group. Okokuqala nje, Okhahlamba izuzwe izilinganiso okusezingeni eliphezulu naphezu bephonsa izinga. The Swiss lifinyelele 7.2 isilinganiso jikelele aphume 10. ngenkathi Denmark, Finland, naseJalimane zonke lifinyelele 6+ isilinganiso. Phakathi izilinganiso, it is especially relevant to mention that Bulgaria achieved a low rating of 1.9. Switzerland izuzwe isilinganiso yaso ephezulu ngoba kukora amamaki egcwele phezu umfutho yokusetshenziswa.
kwenkundla emangalisa Egibela izitimela Swiss.
I imininingwane yombiko
Ngaphezu kokuthola izilinganiso eziphezulu, Izitimela zaseSwitzerland nazo zibhekwa njengenani elihle lemali. Izilinganiso Inkomba zingokulandelayo;
Germany futhi Austria (6.1)
Sweden kanye France (6.0)
Britain futhi I Netherlands (5.3)
Lugano eGeneva Izitimela
Romania futhi Bulgaria (1.9)
Okwenza izitimela Swiss esingcono kakhulu eYurophu?
Okokuqala, kukhona izinto ezimbalwa ezenza isitimela Swiss kuyiwe kwezinye izindawo kakhulu eYurophu. Abagcini izitimela Swiss ukunikeza nokwethenjelwa engcono ukugcina isikhathi e-Europe kodwa futhi basuke kubhekwe ukuba ephephile kakhulu with good quality service. The Swiss are the most frequent train travelers in Europe with over 10,000 izitimela egijima nsuku zonke kwi 3000 km wesitimela inethiwekhi. The Swiss wesitimela senethiwekhi inenani umthamo ukusetshenziswa eYurophu.
Kukhona isizathu esenza izitimela Swiss ziye inombolo zibalwa 1 kusukela 2012. Amazwe amanethiwekhi encane wesitimela (ngaphansi 6,000 km) Sonke silubonile izilinganiso zabo ukuthuthukisa phakathi nalesi sikhathi. This includes Switzerland, Denmark, Finland, Norway, abase Netherlands, futhi Luxembourg. Lawa mazwe ukunikeza uyasigcina ephakeme, high-speed rail percentage and offer a lower cost per km for their service. Equally important, lezi izitimela amazwe izingozi ezimbalwa futhi Abashona ethuthukisa jikelele amaphuzu abo ukuphepha.
Kukhona izindawo eziningi ezinhle ukuvakashela e-Switzerland naphezu lingakanani encane. The alps and glaciers are the main attraction but travelers also enjoy the ancient izinqaba, ecacile oluluhlaza amachibi, and bucolic countryside. Yisiphi isikhathi sonyaka ungakwazi ukujabulela izintaba, i-ICE Skating, imikhosi kanye carnivals eSwitzerland. Ngaphezu kwalokho, kunenani eliphansi kakhulu lobugebengu eSwitzerland elibenza libe yindawo ephephile yabahambi. Izindawo okufanele zibonwe eSwitzerland zifaka iMatterhorn, IZermatt okuyintaba enezithombe ezithwetshulwe kakhulu emhlabeni. ngokulinganayo, I-Chateau de Chillon, Montreux uyisidingo ukubona izivakashi. Le nqaba amanzi lasendulo esakhiwa 25 izakhiwo namagceke ezintathu ingenye avakashelwa izakhiwo mlando emhlabeni.
Bhuka isitimela yaseSwitzerland Gcina a zemininingwane
Ekuphetheni, kunezizathu eziningi ngakho ukuhamba esitimeleni Swiss. Iziteshi zezitimela eSwitzerland mhlawumbe kakhulu zezitimela amahle e-Europe. If you are looking for a romantic holiday or amabhuloho obumangalisayo, Switzerland indawo iya. ukuthatha 3 imizuzu manje ukuba ukubhuka amathikithi isitimela Swiss zethu okulula ukusetshenziswa isitimela isayithi. Amathikithi angathengwa usebenzisa amakhadi esikweletu, kanye nezinkokhelo eziningi okunye.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fswiss-trains-ranked-best-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
SwissAlps Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelswitzerland